Tontolon’ny asa :: Olana goavana ny tsy fananana asa eo amin’ny tanora • AoRaha
Tontolon’ny asa Olana goavana ny tsy fananana asa eo amin’ny tanora
Anisan’ny olana mitambesatra amin’ny ankamaroan’ny tanora eto amintsika ny tsy fananana asa. Ny fahavitsian’ireo tanora mahavita fianarana any amin’ny ambaratonga ambony sy ny hamaroan’ireo mpianatra miala an-daharana any amin’ny kilasy ambany no fantatra fa mahatonga izany.
Fantatra fa manodidina ny fito sisa ireo mpianatra no tonga any amin’ny ambaratonga ambony raha zato ireo no manomboka garabola. “Amin’ireo tanora nahavita fianarana eny amin’ny ambaratonga ambony kosa indray, tena vitsy ireo manana asa ankehitriny”, hoy i Tinoka Roberto,minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora, teny amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina , omaly.
Nifantoka tamin’ny fanomezan-danja ny fanabeazana izay omena ny tanora io fankalazana io. Notsindrian’ny minisitra rahateo fa tanora avokoa ny 60%-n’ny mponina eto amintsika ka mila fanohanana izy ireo mba hahafahany mihoitra manoloana ireo olana mianjady aminy.
“Efa misy ny tetikasa maro ao amin’ny minisitera izay manome sehatra ny tanora. Anisan’izany ny sehatry ny fandraharahana. Hampirisihana izy ireo mba hifototra amin’ny fananganana ny orinasany manokana fa tsy hifototra amin’ny fitadiavana asa amin’ny orinasa tsy miankina na ny fanjakana fotsiny ihany”, hoy Ratovoson Julianna, tale jeneralin’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena.
Fizaham-pahasalamana maimaimpoana :: Nilaharan’ny mponin’Arivonimamo ny CSBII Ambahimanga
Fialan-tsasatra lehibe :: Mbola vitsy ireo olona misafidy hiala ny renivohitra